Projekt Z: vhidhiyo mutambo wakasimbisa rutsigiro rweGNU / Linux | Linux Vakapindwa muropa
Projekt Z: vhidhiyo mutambo wakasimbisa rutsigiro rweGNU / Linux
Project Z ndeimwe yemazita anovimbisa ayo akaziviswawo nerutsigiro rweLinux. Uyezve, haufanire kubhadhara, sezvo ichizopihwa seMahara kutamba paValve's Steam chikuva. Nhau huru dzekugona kunakidzwa pasina kushandisa kana sendi. Uye kana izvo zvichiratidzika kunge zvidiki kwauri, izvo zvakaratidzwa muvhidhiyo zvinoratidza kuti zvakabva ku314 Arts, vagadziri vayo, chokwadi ndechekuti inoita kunge inonakidza kwazvo ...
Kana iwe wanga usati waziva Projekt Z zvakadaro, ndezve zombie kupona FPS nekwanisi yekutamba mumubatanidzwa mamiriro uye kumisikidza kumagumo kwechipiri Hondo Yenyika. Yese nyaya inoitika pachivande chitsuwa cheGerman uko iwe nechikwata chako marova mutsaona. Kubva pachiitiko icho chiito chose icho zita iri rinounza kwauri chichaitika ...
Zita rekuti Projekt Z rave zvakare rakafuridzirwa muchidimbu neRuboshwe 4 Vakafa, ine mavara akasiyana. Asi zvinoita sekunge iri yechokwadi vhezheni ichienzaniswa neiyo imwe zita, pamwe nezvinhu zvekushandira pamwe nekupona zvinoita kuti zvionekwe. Zvakare, iyo AI yevatambi vakafa inoshanduka kuita zombies inotaridzika zvakanaka zvakare. Rondedzero yezvidiki zvidiki izvo pamwe zvinonzwika zvakanaka chaizvo nezve izvo zvekutanga-munhu shooter mutambo wevhidhiyo uchave.
Inowedzerawo a mamiriro-e-iyo-art giraidhi system, zvombo chaizvo zvenguva ino, "gore" system umo zvikamu zveZombies zvichaparadzaniswa nemuviri panguva yehondo kana ukazvikuvadza, uye chimiro chakachena kwazvo kuitira kuti unyatsotarisa pane kunakidzwa pachako, pasina zviratidzo, mamenu kana chero chinhu chinogumbura kuona chinogara chichifungidzirwa. Kune vamwe vese, unogona kuzvitongera wega izvo zvinoonekwa muvhidhiyo iyi yavakaburitsa ...
Mamwe mashoko - Yepamutemo Webhu
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Projekt Z: vhidhiyo mutambo wakasimbisa rutsigiro rweGNU / Linux
Vhura mhinduro sosi yekudzivirira DDoS kurwisa
Iwo akanakisa kugovera kweLinux iwe aunogona kuisa pane yako Raspberry Pi